Home Wararka Khalalaase ka dhashay gubid loo geystay kitaabka Quraanka Kariimka ah
Khalalaase ka dhashay gubid loo geystay kitaabka Quraanka Kariimka ah
Warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in saddex qof ay ku dhaawacmeen magaalada bari ee Norrköping Axaddii ka dib markii booliska ay rasaas digniin ah ku rideen dibadbaxayaasha. Dhowr baabuur ayaa lagu gubay ugu yaraan 17 qofna waa la xiray.
Sabtidii, baabuur uu ku jiro bas ayaa lagu gubay koonfurta magaalada Malmo oo ay ka socdeen isu soo bax ay dhigayeen kooxda midigta fog. Ficilladiisa ayaa waxay ay horseedday in dowladaha Iran iyo Ciraaq ay u yeereen wakiilada Sweden si ay uga dhiidhiyaan gubidda nuqulada kitaabka Qur’aanka ah.
Previous articleGud. hore Gobolka Gedo oo sheegtay inuu xalay ka badbaaday isku-day dil
Next articleCIidanka Xooga Dalka oo qaaday howlgalo ka dhan ah xubno ka tirsan Al-Shabaab
Xildhibaano , Wasiiro & Gudoomiyaha G/Banaadir oo xalay ku shiray Hotel...
Qiyaanada ku jirto dooda MW Farmaajo ee ah waxaa qabanayaa doorasho...